Izimo Ezivamile Zempilo Yengqondo | Impilo Yengqondo Texas
Sonke sinezikhathi ezimbi nezinsuku ezinzima. Sonke sizizwa sidabukile, sikhathazekile futhi sesaba kwesinye isikhathi. Kwabanye abantu, le mizwa iyazixazululela ngokwabo futhi ingeyesikhashana. Kepha kwabanye, le mizwa nemizwa ingahlala isikhathi eside futhi izwakale ingabekezeleleki.
Abanye abantu bake babhekana nezingcindezi ezinkulu, izinhlekelele, noma izehlakalo ezihlukumezayo eziqala le mizwa emibi. Abanye bangahle babe nokuthambekela kokuzalwa, noma ukuthambekela, kokuthuthukisa isimo esithile noma izimo eziningana. Izimo zempilo yengqondo zithinta imizwa yomuntu, ukucabanga kwakhe nokuziphatha kwakhe kuze kufike ezingeni lapho imisebenzi yabo nekhwalithi yempilo kuthinteke kakhulu. Lezi zimo zingadala izinkinga eziningi kulabo abanazo, kufaka phakathi ubunzima bobudlelwano, ukwanda kwengcindezi, ukungasebenzi kahle, nobuhlungu bomzimba. Izimo nezimpawu zazo kungaphazamisa ubudlelwano bomuntu siqu nokusebenza komsebenzi.
Mhlawumbe wazi othile ophila nesimo sokuziphatha njengokucindezeleka, ukukhathazeka, noma ukuphazamiseka kokusebenzisa izidakamizwa, noma mhlawumbe nawe uhlangabezana nezimpawu futhi ufuna usizo. Sikumema ukuthi uhlole amakhasi alandelayo abhekisisa ezinye zezimo zezempilo yengqondo futhi ahlinzeke ngezinsizakusebenza ezengeziwe eziqondene nalesi simo.
Uthi bewazi… 46 %
baseMelika bazoba nesimo sokuxilongwa sempilo yengqondo ngesikhathi sokuphila kwabo 1 ?
Suicide Ukuphazamiseka KweBipolar Anxiety Psychosis Trauma Ukusetshenziswa Kwezidakamizwa Depression IDD
Lezi ngezinye zezimo zezempilo yengqondo ezivame kakhulu ukuzwa kepha akusizona kuphela ezikhona. Ngemininingwane mayelana nezinhlobo ezingeziwe zezimo zempilo yengqondo, Chofoza lapha .
UKessler, RC, Berglund, P., Demler, O., Jin, R., Merikangas, KR, & Walters, EE (2005). Ukusabalala kwesikhathi sokuphila nokusatshalaliswa kweminyaka yobudala bokuphazamiseka kwe-DSM-IV kuNational Comorbidity Survey Replication. Izinqolobane zokugcina izifo zengqondo ezijwayelekile, 62 (6), 593-602.